ईण्डियन आर्मीले अल पत्र पार्यो, पेन्सन निस्केपछि भारतमै गाय व परिवारको बि चल्ली (भिडियो हेर्नुहोस्) – Onlines Time
December 22, 2020 onlinestimeLeaveaComment on ईण्डियन आर्मीले अल पत्र पार्यो, पेन्सन निस्केपछि भारतमै गाय व परिवारको बि चल्ली (भिडियो हेर्नुहोस्)
ईण्डियन आर्मीले अल पत्र पार्यो, पेन्सन निस्केपछि भारतमै गाय व परिवारको बि चल्ली
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर मारेको घोषणा गर्नु असंवैधानिक भएको दाहालले बताए । ‘हामी मर्‍यौं कि जीवित छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ । मलाई पनि हामी मर्‍यौं कि भनेजस्तो फिल हुन्छ तर लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानअनुसार हामी जीवित छौं,’ भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘अब जीवित छौं भनेर प्रमाणित गर्न जुलुस लगाएर हिँड्नुपर्ने भयो । हामी जीवित छौं भन्ने बुझ्न पहिला सर्वोच्च अदालत जानुपर्‍यो ।’
सांसद पद रहेको बुझाउन उनले भारतको लखनउको घटनासमेत बैठकमा सुनाएका थिए । लखनउमा जिउँदै मानिसले आफैं जीवित रहेको जुलुस निकालेजस्तै आफूहरू पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । ‘लखनउमा सम्पत्तिका लागि आफन्तले मरेको प्रमाणित गरेर सम्पत्ति हडपेका हुँदा रहेछन्, नमरेको मान्छेलाई मरेको भनेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा तँ मरिस् भनिँदो रहेछ । त्यसपछि पीडितहरू एकजुट भएर हामी जिउँदै छौं भनेर जुलुस लगाएको देखेको थिएँ । हामी पनि जीवित छौं भनेर सर्वोच्च जानुपर्ने भयो । सर्वोच्च अदालतलाई भन्नुपर्‍यो, हामी जिउँदै छौं ।’
कांग्रेस, जनता समाजवादी र अरू पार्टीका सांसदसमेतको साथ लिएर सरकारले चालेको कदमविरुद्ध न्यायालय जाने जानकारी उनले भेलामा गराए । ‘आज मात्रै १ सय १४ जना हामी संघीय सांसदले हस्ताक्षर गरेर हामी जिउँदै छौं भन्नुपर्‍यो । केही–केही साथीहरू हामी मर्‍यौं भनेर बसिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई के भन्नुपर्‍यो भने तपाईंहरू कहाँ मर्नुभएको छ र ? जिउँदै हुनहुन्छ,’ ओली पक्षका सांसदलाई इंगित गर्दै दाहालले भने, ‘हामी जिउँदोतिर आउनुस् भन्नुपर्‍यो । हाम्रो दुई वर्षको कार्यकाल जिउँदै छ । ती साथीहरूलाई तिमीहरू मर्‍यौ भन्नुभएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले हो । हामी मरेकै छैनौं ।’
सबै सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्च अदालत गएपछि न्याय पाइने दाहालले बताए । सर्वोच्चमा दुई सयभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारले चालेको कदमको विरोधमा जाने दाहालले भेलामा जानकारी गराए । ‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ड्याम्म हानेर मरियो भनेर निराश नहुनुस्,’ उनले भने । पार्टी एकता टुटाउन ओलीले गएको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै प्रयास गरेको दाहालको आरोप छ ।
अध्यादेश ल्याएर, सचिवालय सदस्यहरूको अपमान गरेर, पार्टीको निर्णय पालना नगरेर पार्टी फुटाउन खोजेको उनले बताए । नियमित संसद् अधिवेशन बोलाउनुपर्नेमा ओलीले अपारदर्शी ढंगले अध्यादेश ल्याएको उनले बताए । ओलीले सधैं झूटो मात्रै बोल्ने गरेको दाहालको आरोप छ । ‘मलाई त झूट बोल्यो बोल्यो, स्थायी कमिटीलाई समेत नाङ्गै झूटो बोल्नेलाई के भन्ने ?’ उनले भने, ‘ढाँट, छल, बेइमानीको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो पनि हुन्छ ? स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेशअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गरेकै छैन भन्ने तर सबै गरेर भ्याइसकेछन् ।’
‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि नै विघटनको खबर पाएँ’
‘बिहान साढे ६ बजे सूचना के आयो भने प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्ट भंग गर्दैछन् । सबैतिर सम्पर्क गरे । वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि सम्पर्क गरेर संसद् विघटन हुँदै छ भन्ने भरपर्दो सूचना पाएँ,’ सम्बोधनमा दाहालले भने, ‘यसलाई नरोक्ने हो भने गम्भीर दुर्घटना हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई साढे ८ बजेदेखि फोन गरें । यस्तो सोच्नुभएको छ भने कम्तीमा म र तपाईं छलफल गरौं, यस्तो डिसिजन नगर्नुस् भनेको थिएँ । उहाँले हुन्छ भन्नुभएको थियो ।’
छोरा छोरी श्रीमान् छोडेर टाप कसेकी सिता को माइती मिडियामा।बास्तबिकता यस्तो ज्वाँई सग यस्तो कुरा भयो।
चीनसँगको सहकार्यमा नेपालमै विद्युतीय गाडीको एसेम्बल प्लान्ट, साझाको बस खरिदमा कम्पनीको, भिडियो हेर्नुहोस (जानकारीका लागि सेयर गराै)
सचिन सितैबस्ने ठूलोआसा बोकि छोरा र श्रीमान भेटन Sachin को आमा Ktm हिडिन, बिहे देखि अहिले सम्मका कुरा (भिडियो हेर्नुहोस्)